အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: August 2010
ဒီမေးခွန်းတွေ အားလုံးရဲ့အဖြေကို နားလည်လိုက်ပါရဲ့
ဘန်ကောက်ရဲ့ ကောင်းကင်က ကြယ်တွေ မရှိဘူး
Posted by တီချမ်း at 7:22 AM No comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 5:23 AM3comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 3:56 PM7comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 3:43 PM3comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 1:01 PM No comments: Links to this post
ကလေးဘဝတုံးက ဆို အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲလို့ အမေးခံရင် ခဏခဏ ဂုဏ်ယူစွာ ဖြေခဲ့ဘူးပါတယ်။ ကလေးဘဝတုံးကတော့ အသက် မြန်မြန်ကြီးချင်တာကိုးနော်။ နောက်တော့ အပျိုပေါက် ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာလဲ အသက်ကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ဖြေနိုင်ပါသေးတယ် ကိုယ် လူကြီး ဖြစ်ပြီ အပျိုမကြီး ဖြစ်ပြီ ဆိုတာ ကို ပြချင်တာပေါ့။ အဲ အဲ့ထက် နောက် နည်းနည်းလေး ပို ကြီးလာတဲ့ အခါမှာတော့ အသက် ကိုမေးလာတဲ့ အခါ ဖြေရမှာ နည်းနည်း တုံ့နှေးလာပါပြီ။ ခုခေတ်ကလဲ ၂၀ ကျော်ရင် ပဲ ဟိုင်းပြီ လို့ပြောနေကြတဲ့ခေတ်ကိုးနော်။ ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ အင်း……..
အရွယ်ရောက် မိန်းမတယောက်အနေနဲ့ အသက် ကို အမေးခံရတိုင်း သိပ်ဖြေရခက်တာပါပဲ။ ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲရောက်တယ် ဆိုတာ အဲ့လိုအခြေအနေမျိုး ကိုခေါ်တာပေါ့။ အဲ့လိုအမေးခံရ တိုင်းလဲ စိတ်ညစ်ရတာ စိတ်ဒုက္ခရောက်ရတာ တကယ့်ကိုပါပဲ။ အပိုပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော် အမေးခံရဖူးတဲ့ မိန်းမတွေ သိလိမ့်မယ်။ မယုံရင် မေးကြည့်ကြ။ တချို့ဆို ကိုယ်တိုင်လဲ ကြုံဖူး ကြမှာပါ။ အဲ့အတွက် ခု တီချမ်းက နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ပေးချင်ပါတယ်။ ဘတ်ကြည့် လေ ပြီးတော့ အသုံးတည့်တော့လဲ အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ နောက်ဆို အသက်နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ ဘယ်လို မေးခွန်း လာလာ အေးဆေး ဖြစ်သွားပြီပေါ့။
ခုန ပြောခဲ့သလိုပဲ အရွယ်ရောက်မိန်းမ လူလတ်ပိုင်းမိန်းမတယောက်အနေနဲ့ အသက်ကို အမေးခံရတိုင်း သိပ် သိပ် သိပ် အခံရခက်ပါတယ်။ ကိုယ်က အဲ့တာ ကို တိုက်ရိုက် မဖြေချင်လို့ အသက်ဘယ်လောက်လဲမေးတဲ့အခါမှာ “လျှို့ဝှက်ချက်” လို့ ပြန်ဖြေမိပြန်ရင်လဲ ကိုယ့်အသက် အရမ်းကြီးနေလို့ မဖြေချင်တာလို့ လူတွေက ထင်တတ်ကြပြန်တယ်။ (ဥပမာ “မမကွမ်” ကိုပဲ ကြည့် ဘယ်တော့မှမဖြေဘူး အသေသာသတ်ချင် သတ်ပစ်လိုက်ဆိုတာမျိုး၊ ကိုယ်နဲ့ သိတဲ့ အပျိုကြီးတယောက်ရှိပါသေးတယ် ခုတော့ အမေရိကား ရောက်သွားပြီ သူလဲ အသက်မေးရင် ဘယ်လိုလှည့်မေးမေး သေတောင်မဖြေဘူးဆိုတဲ့အစားထဲကပါ ဖြစ်ချင်တော့ သူ့နာမည်က တောင် “သက်” ဆိုတာပါနေသေးတယ် ခုတော့ အသက်ကို မေးရင် ရိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ အနောက်တိုင်း ရောက်သွားတော့သူ့အတွက် အဆင်ပြေတာပေါ့လေ အရှေ့တိုင်းမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျန်နေသေးတဲ့ ဆက်လက်နေထိုင်သွားမယ့် မမကြီးများ၊ တဖြေးဖြေး အသက်ကြီးလာနေတဲ့ မမများ ဥပမာ “ဒေါ်ရီတာ” တို့ ကိုရည်ရွယ်ပါတယ်လေနော်)။
ဒီ အာတီကယ် မှာ တီပြောချင်တာက အသက်လို့မေးတိုင်း လူတိုင်းက နံပါတ်တွေကို ပြေးပြေး ပြီးမြင်တတ်ကြပါတယ်။ အသက်ကို နံပတ်နဲ့ မဖြေဘဲ လှလှလေး မေးတဲ့ လူလဲ ကျေနပ် အောင် ဖြေလို့ရပါတယ်။ နောက် အသက်မေးခံရတဲ့ အခါတိုင်း ဒီလိုလေးတွေ ဖြေကြည့်ကြ ပါနော်။
ဘယ်လိုလဲ ဟုတ်လား…? ဒီလိုလေ…………ဥပမာ…
• အော် “အသက်” လား………ဈေးသွားဝယ်နေတယ် လို့ ဖြေလို့တော့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ နော် ငပေါကြီး ဖြစ်သွားမှာပေါ့ (ဟားဟား အလကား စတာပါ)
• အင်း တို့အသက်လား…..(ဒီနေရာမှာ ခဏလေး ပေါစ် pause လိုက်ပါ ပြီးတော့ မျက် လုံးလေး စဉ်းငယ်ခန့်မှေးပြီး အိုက်တင် ခံ နိုင်ပါသေးတယ်…စကားချပ်) လက်ထပ်ချင် တယ်ဆိုတဲ့ အရွယ်ကို နည်းနည်းတော့ လွန်လာပြီ…
• အင်း တို့အသက်လား…..ကတိတွေကို ရူးရူးမိုက်မိုက် ယုံတတ်တဲ့ အရွယ်ကို နည်း နည်းလေးတော့ လွန်လာပြီ…(အထက်ပါ စတိတ်မန့် နဲ့ ကွာခြားမှု ကိုသတိပြုပါ)
• အင်း တို့အသက်လား…..လက်ထပ်ချင်တဲ့ အရွယ် ကို လွန်လာပြီ ဒါပေမယ့် ကတိတွေ ကို ရူးရူးမိုက်မိုက် ယုံတတ်တဲ့ အရွယ်ကိုတော့ မကျော်သေးဘူး…
• အင်း တို့အသက်လား…..ယောက်ျားတွေကို ကိုယ်ကအချစ်နဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ ရ တယ် ဒါမှမဟုတ် ယောက်ျားတွေ က ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ် ပြောင်းလဲလာလိမ့် မယ် ဆိုတာ ကို ယုံကြည်တတ်တဲ့ အရွယ်ကို နည်းနည်းတော့ လွန်လာပြီ…
• အင်း တို့အသက်လား…..ချိုမြိန်တဲ့ ပျားသကာ အလိမ်အညာ ပလီပလာ ကလော် ကလည် စကားတွေ ကို မျက်စိမှိတ် သဘောကျ ပြီး ယုံတတ်တဲ့ အရွယ်ကို နည်းနည်း တော့ လွန်လာပြီ…
• အင်း တို့အသက်လား…..အချစ်ဆိုတာ တဘဝလုံးပါ လို့ ယုံတတ်တဲ့ အရွယ်ကို နည်း နည်းတော့ လွန်လာပြီ…
• အင်း တို့အသက်လား…..ကမ်းစပ်သဲသောင်ပေါ်မှာ ခြေပလာ နဲ့ လျောက်လှမ်းပြီး ကောင်းကင်က ကြယ်တွေ ကို တူတူရေ ကြမယ်ဆိုတဲ့ အရွယ်ကို နည်းနည်းတော့ လွန်လာပြီ…
• အင်း တို့အသက်လား…..တနေ့နေ့ကျရင်တော့ မင်းသားလေးက မြင်းဖြူစီးပြီး လာခေါ် လိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည်နေတဲ့ နှစ်တွေမှာပဲ ရပ်တန့်ထားတာကြာလှပြီ
• တို့လား….အိုလွန်းလို့ နောက်တခေါက် အသည်းကွဲတာ ကိုခံနိုင်ဖို့ တောင် ခံနိုင်ရည် မရှိ တော့တဲ့ အရွယ်ရောက်နေပြီ…
• အို မီး…………အသက်လား…….မီးက ခုမှ “ခေး” ပဲ ရှိသေးတာ ကို အချစ်ဆိုတာကို ဘာမှန်းတောင် မသိသေးဘူး “မေ” ဆူလိမ့်မယ်…
• အင်း မီးအသက်လား…..ငယ်လွန်းသေးတယ် ယောက်ျားတယောက်ကို မီးက ငြင်းလိုက်တာတောင် သူက တသက်လုံး မီးကိုစောင့်ရှောက်မှာပါ လို့ ထင်နေ ယုံနေသေးတယ် မနူးမနပ်သေးတဲ့ တင့်တင့်တို့ အရွယ်ပဲ ပြောမလားနော်…ခိခိခိ…
ဒါနဲ့တောင်မှ မင်းက အတင်းပဲ ဆက်ပြီး “ဒါဆို လာမယ့်နှစ်မှာ “မ” က အသက်က ဘယ် လောက်ရှိပြီလဲ…?” လို့ လိုက်မေးနေအုံးမှာလား…? ကိုယ်ဒီလောက် နှစ်မျက်နှာ ကျော်ကျော် တောင် ဖြေလာပြီးပြီ အများကြီးလဲ ပြောပြပြီးပြီ၊ ဒီလောက်တောင်မှ မင်းက မခန့်မှန်းတတ် သေးဘူးဆိုရင်တော့ မင်းရဲ့ အိုင်ကျူကကော အသက်ဘယ်လောက်မှ ကျန်နေခဲ့သလဲ ဆိုတာ ကိုယ်သိချင်လိုက်တာ…။
Posted by တီချမ်း at 2:59 PM4comments: Links to this post
ကြည့်ရတာ ယောက်ျားကောင်းဆိုတာ တကယ်ကို ရှားပါးပစ္စည်း ဖြစ်နေပြီထင်ပါ့။ မဆိုးဘူးလို့ ပြောရမယ့် ယောက်ျားဆိုတာတွေ အကုန်လုံးဟာ မိန်းမ ရှိပြီးသား ဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်၊ မဟုတ်ရင် အနည်းဆုံး ရည်းစားတော့ ရှိပြီးသား အဲ့တာမှ မဟုတ်သေးရင် မိန်းမ ကို စိတ်မဝင်စားတဲ့သူ ဖြစ်ဖို့က ခပ်များများပဲ။
အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အရွယ်ရောက်၊ အရွယ်လွန်စပြုနေပြီဖြစ်တဲ့ မိန်းမတွေအများစုဟာ ထိုထိုသော လူလွတ် အမျိုးကောင်းသားများကို မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာ မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာ ရှာဖွေနေ ကြပါ တယ်။ နားရှုပ်သွားသလား၊ မျှော်လင့်ချက်ကို ထားလဲထားချင်တယ် ရှာလာခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း အများကြီး ကနေပြီး မျှော်လင့်ချက်ကလဲ ကုန်သလောက်ဖြစ်နေပြီ ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုးပေါ့။
အဲ့လိုနဲ့ သူတို့တွေဟာ လူလွတ် ဆိုတဲ့ ယောက်ျား တယောက်ယောက်ကို တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင် တလုံးကိုပြေးမြင်တော့တာပဲ။
သူသာ လူလွတ်ဖြစ်ပစေ သူမ မှာ အခွင့်အရေးရှိပြီးသားပဲ။
(ဒီနေရာမှာ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင် ဆိုတာ ကို နွေးထွေးမှု၊ ရင်းနှီးမှု၊ အကြင်နာ စတာတွေနဲ့ မြင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ တမျိုးမမြင် စေချင်ပါ။ အမှန်ကတော့ ရှင်းပြနေရတာ ကိုက စာဘတ်သူ ကို တမျိုးမြင်လိမ့်မယ်လို့ ကြိုတွေး ရှင်းပြနေရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် စော်ကားရာရောက်ပါတယ်။ ကိုယ်က မရှင်းပြချင်ပါ သို့သော် ကိုယ့်စာ လာလာ ဘတ်ကြတဲ့ သူတွေထဲမှာ အမြင်တိမ်တဲ့ ယောက်ျားတွေလဲ အများကြီး ရှိနေ သေးတဲ့အတွက် လွန်ခဲ့သော အတွေ့အကြုံများအရ ရှင်းပြရပါတယ်။)
မိန်းမတယောက်က လူလွတ်ယောက်ျားတယောက် ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ သူမက သူ့ကို ၁၀၀ % ပြည့် သဘောကျတာတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ သူ့ကို ဟိုဟာမကြိုက်သလိုလို ဒီဟာမကြိုက် သလိုလိုတော့ ဖြစ်နေသေးတာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ သူမကို ဝိုင်းပြောကြ တာက “လူလွတ် ဖြစ်နေတာကိုက သူ့ရဲ့ အားသာချက်ပဲ” တဲ့ အဲ့လိုမျိုးပြောကြတဲ့အခါ ကျ တော့လဲ မိန်းကလေးအနေနဲ့က သူတို့ပြောတာ ဟုတ်သားပဲ လို့ ခေါင်းငြိမ့် ဝန်ခံရပြန်တာပဲ။
သူသာ လူလွတ်ဖြစ်ပစေ သူမ မှာ အခွင့်အရေးရှိပြီလေ။ သူမ လိုချင်သလို ပြင်ယူနိုင်တာပဲ။ သူ့ကို သူမ ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ရှိပြီလေ။ သူ သာ လူလွတ်တယောက်မဟုတ်ခဲ့ရင် ဘာပြောပြော အလကားပဲလေ။ မစားကောင်းတဲ့ အသီး ကိုးနော်။ စပျစ်သီးချဉ်ရတော့မယ် လေ။ အဲ့တော့ ဘာပဲ ပြောပြော လူလွတ်ဖြစ်နေတယ် ဆိုတဲ့ တချက်တည်း ကိုက အမှတ် ၉၀ ပဲ။
ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ လူလွတ်ဆိုတာ ကိုက ရွှေထက်တောင် ရှားပါးနေတာပဲလေ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ မိန်းမတွေဟာ လူလွတ်ယောက်ျားတွေ ကို အဓိက ပစ်မှတ်အနေနဲ့ ထားပြီး စတင်ဖွေ ရှာကြပါတော့တယ်။ လူလွတ်ယောက်ျားမှန်သမျှကလဲ သူတို့လိုပဲ လက်ထပ်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ ကြင်ယာဘက်ကို လိုက်ရှာနေတယ် ဆိုတဲ့ မှန်းဆ အထင်နဲ့ပေါ့။ အမှန်ကတော့ သူတို့ (ယောက်ျား) တွေ လူလွတ်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာက အချစ်ဆုံးဆိုတာကို မတွေ့ကြသေးလို့ပါ။ မိန်းမတွေက သာ ကိုယ့်ထင် ကုတင်ရွှေနန်းနဲ့ အဲ့ဒီ သင့်တော်တဲ့ ကြင်ယာဘက်ဆိုတာ သူ့ကိုပြောတာပဲလို့ ကလေးတွေး တွေတွေးပြီး ထင်နေကြတာ။ သူလိုချင်တာ သူရှာနေတာ သူမပဲ လို့ တထစ်ချမှတ်ယူပြီးတော့လေ။
နောက်ပြီး အရွယ်ရောက် လူလွတ်ယောက်ျားတိုင်းကရော လက်ထပ်ချင်နေကြတယ်လို့ ဘယ်သူက ပြောလဲ။ တကယ်တော့ အရွယ်ရောက်ပြီးရင် သင့်တော်တဲ့ လူတယောက်ရှာ လက်ထပ်ရမယ် ဆိုတာ မိန်းမတွေရဲ့ တဘက်သတ် စိတ်ကူးယဉ်မှု နွေနေ့လည် အိပ်မက် တခုမျှသာပါပဲ။
သူမကတော့ လူလွတ်ယောက်ျားတယောက် ကို သူမ ကောင်းကောင်း ထိန်းချုပ်နိုင် ချုပ်ကိုင်နိုင်မယ် ထင်နေတယ်။ တကယ်တန်းကျတော့ လူလွတ်ယောက်ျားဆိုတာမျိုးတွေက ချုပ်ကိုင်ဖို့ အခက်ခဲဆုံးဖြစ်နေတာကိုး မဟုတ်ရင်လဲ အစောကြီးကတည်းက တခြားမိန်းမတွေ က သူတို့ရဲ့ ပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်ကုန်ကြရောပေါ့။ ချုပ်ကိုင်ပြီး ကုန်ကြရောပေါ့နော်။
နောက်ပြီး လွတ်လပ်တာ၊ အလားအလာကောင်းရှိတာ တွေနဲ့ ပြည့်စုံတိုင်းလဲ ယောက်ျား ကောင်းဖြစ်မယ် လို့ပြောလို့ ရတာမှမဟုတ်တာ။ ပြီးတော့ တကယ်ကောင်းတဲ့ လူလွတ် ယောက်ျားဆိုရင်လဲ အိမ်ထောင်ရေး ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ သူဖြစ်အုံးမှ။
နောက်ဆုံးတော့ လူလွတ်ဆိုတိုင်းလဲ ကိုယ်တွေအတွက် နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင် မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေနော်။
Posted by တီချမ်း at 2:00 AM3comments: Links to this post
ေ-ာက်ဖြစ်ရှိရင် ဝက်သား မစားကြနဲ့
ဝက်လို ဝနေလို့ စိတ်ညစ်စရာလား?
ဝက်လို တုံးနေလို့ သနားစရာလား?
ဝက်လို ပျင်းတတ်တာ အပြစ်လား?
ဝက်လို ပုံတုံးတာ ရှက်စရာလား?
ဘာလို့ လူတွေက သူတို့ဝန်မခံချင်တာတွေဆို
အကုန် ဝက်ကိုပဲ ပုံချနေကြတာလဲ?
ဝက်ကိုပဲ အရာရာ လွှဲချမနေကြနဲ့တော့
(မှတ်ချက်… ဘာသာရေးနဲ့ ဘာမျှမဆိုင်ပါ
လူအားလုံး အတွက်ယေဘုယျ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
ပုံတွေ အကုန် ဂူဂဲလ်ပါတယ်။
Posted by တီချမ်း at 3:51 AM5comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 9:56 PM4comments: Links to this post
ဒီနေ့ Friday the 13th လေ အဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပိုစ့်ရေးမလို့ စဉ်းစားသေးတယ် နောက်တော့ စိတ်ကရွှင်နေတာနဲ့ မရေးဖြစ်ပါဘူး Valentine day တုံးကလဲ အဲ့လိုပါပဲ စာတွေ ရှာဘတ်ပြီးတော့ မရေးဖြစ်ဘူး ခုတော့ ပိုဆိုး ရှာတောင်မဘတ်ဖြစ်ဘူး အဲ့တာနဲ့ အီးမေးလ်တွေ စစ်ရင်း သူငယ်ချင်းတယောက်ပို့လိုက်တဲ့မေးလေး သဘောကျလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ် ခုနောက်ပိုင်းဒီလိုဥာဏ်ကြီးရှင်တွေ ရဲ့ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ တီတီထွင်ထွင် အီးမေးလ်လေးတွေ ဘတ်ရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ်
ဖော်ဝပ်မေးလ် ပို့ပေးတဲ့အတွက်လဲ မအေမီ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် များသောအားဖြင့် ဖော်ဝပ်မေးလ်တွေကို မဘတ်ဘဲ ဒလိ ပစ်တာများတယ်လေ ဒါလေးတော့ သဘောကျမိတယ် အပျော်ပေါ့နော်
...small house for the kids to run
Posted by တီချမ်း at 9:09 PM 10 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 1:19 PM6comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 3:01 AM5comments: Links to this post